जनताको माया र विश्वासमा घात हुने छैन – Dainik Lumbini
प्यूठान जिल्लाको माण्डवी अन्य नौ स्थानीय तह मध्ये भौगोलिक रूपमा सानो पालिका हो । माण्डवी गाउँपालिका वडा नं. ५ रम्दीमा जन्मिएका श्रीधर रोका उमेरको हिसाबले अन्य स्थानीय तहका प्रमुखभन्दा कान्छो जनप्रतिनिधि पनि हुन् । नेकपा एमालेबाट पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित उनले यतिबेला माण्डवी गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् र उनको कामप्रति स्थानीयस्तरमा सराहना पनि भइरहेको छ । यसैबीच कोभिड–१९ को प्रभाव यस पालिकामा पनि परेको छ । यस्तो अवस्थामा उनले अघि सारेको समृद्ध माण्डवीको लक्ष्यसँग समग्र गाउँपालिकाको विकास निर्माणको काम कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने सम्बन्धमा दैनिक लुम्बिनी प्यूठानका संवाददाता राधिका भुसालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
तपाईंको गाउँपालिकालाई कसरी चिन्न सकिन्छ ?
माण्डवी गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी स्थानीय तह हो । खोलानाला, वन जंगल, भौगोलिक बनावट सबै क्षेत्रबाट हेर्दा मिलेको छ । प्रदेश नम्बर ५ कै महत्वपूर्ण झिमरूक जलविद्युत् आयोजनाले हाम्रो पालिकाको छुट्टै पहिचान बनाएको छ । १२ मेघावाट उत्पादन क्षमता रहेको आयोजनाका लागि बुटवल पावर कम्पनीको भूमिका सराहनीय छ । संघ र प्रदेश सरकारलाई आम्दानी स्रोतको रूपमा जोड्न सक्ने धेरै चुनढुंगाका खानी भएको पालिका पनि हो माण्डवी । कृषि उत्पादन हुने भुभाग थोरै भए पनि पालिका भित्रका जनताको जीवन स्थरमाथि उठाउने मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि नै हो । अहिले कोभिड–१९ को महामारीले झनै कृषि क्षेत्रको महत्व बढाएको छ । तत्कालिन समयमा नेपालकै नमूना बाख्रा फर्मको रूपमा चिनाउन सफल लेकाली बाख्रा फर्म हाम्रै पालिकामा छ । उक्त फर्म राष्ट्रपतिबाट सम्मानित भइसकेको छ । उहाँसंगै थुप्रै मान्छेहरू व्यवसायिक बाख्रा पालनमा लागेका छन् । कृषि क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको पालिका रहेकोमा अब झन कृषिको विकासमा जोड दिएका छौं । कृषिको विकासलाई ध्यानमा राखेर आगामी बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । कृषिमा आगामी वर्षमै केही विकास देखिने गरी काम गर्नेछौं ।
स्थानीय तहको यो अवधिलाई कसरी बुझ्नु भयो ?
तीन तहको सरकारको रूपमा परिभाषित गरिंदै गर्दा हामी स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर बसीरहेका छौँ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय तह जनताका लागि उपलब्धिमुलक हो भन्ने मलाई लागेको छ । किनभने जनताको हरेक सुख दुःखको सारथी भएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताहरूसंग हातेमालो गर्दै, गुनासो, समस्या, सुझाव सल्लाहअनुसार दिनानुदिन हामीले गर्ने काम कर्तव्यकाबारे जानकारी गराउने र जनतालाई सुसुचित गर्ने काम अग्नीपरिक्षाको रूपमा स्थानीय तह रहेको छ । अहिले विश्वलाई नै नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले त्राही–त्राही पारेको छ । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । तर हामी कत्ति पनि विचलित नभई जनताको सेवामा खटेका छौं । संकटको बेला हामीले जनताको सेवकको रूपमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको महशुस भएको छ । गाउँगाउँमा सिंह दरबारको नारा लगाइएको छ त्यो नारालाई स्थानीय तहले परिपूर्ति गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईंको गाउँपालिकाले गरेको नमूना काम के छ ?
हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक रूपले सानो भए पनि अन्य विकट गाउँपालिका सरह नै छ । जनताको घरदैलोमा हामी पुग्दा सडक बिस्तार नै उहाँहरूको प्रमुख माग छ । त्यो मागलाई सम्बोधन गरेर हामीहरूले अत्यन्तै दुरदराजका बस्तीमा सडक बिस्तार गर्ने कार्य लगभग लगभग अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेका छौं । यसैबीचमा कोरोना कहरसंगै देशभर लकडाउनको मार आइपरे पनि हामीले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छौं । यस गाउँपालिकाको अर्को मुख्य समस्याको रूपमा रहेको खानेपानीको समस्यालाई पनि अन्त्य गर्नका लागि गाउँपालिकाले गत वर्ष करिब १२ सय घरधुरीलाई एक घर एक धाराको व्यवस्था गरेको र अन्य छुटेका खानेपानीको अभावको बस्तीमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको समपुरक कोषबाट बजेट विनियोजन गरी समाधान गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ । मुख्यत यस गाउँपालिकाको विकासलाई दिगो लक्ष्य प्राप्तीका लागि शिक्षा क्षेत्र नै प्रमुख आधार हो त्यो क्षेत्रको विकास नगरी यो गाउँपालिकाको विकास सम्भव छैन भन्ने मुल उदेश्यका साथ झण्डै ३३ प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्दै आइरहेको अवस्था छ । त्यसअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा धनी र गरिबको बीचमा देखिएको खाडल अन्य गर्नु छ । धनीको छोराछोरीले निजी र गरिबका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिपाटीलाई हाम्रो पालिका तोड्न सफल भएको छ । र, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेका छौँ । यससंगै पालिकामा रहेका २६ वटा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार, निजी शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्दै जनताले चन्दा उठाएर शिक्षक पाल्ने समस्या थियो त्यो समस्यालाई पालिकाले आन्तरिक तबरबाट बजेटको व्यवस्था गरी समाधान गरेका छौं । प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याअनुसार ३० जना शिक्षक खटायौँ । शिक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक असर पार्ने खालका कामहरू जस्तैः प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापन, विद्युतीय हाजिरी र टाढा टाढाका विद्यार्थीलाई बसको व्यवस्था, बालविकास केन्द्रका बालबालिकाहरूलाई टिभीमार्फत पठनपाठनको व्यवस्थालगायतका शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै कार्यहरू हामीले गर्दै आयौं । शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको संकट व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं । शिक्षासंगै पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूलाई तालिम, औजार वितरण, अनुदान तथा अवलोकनका कार्यहरू गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा चुनौतीहरू के–कस्ता छन् ?
चुनौति अवश्य छन्, त्यसमाथि कोरोनाले ल्याएको संकट टार्न झनै चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा जनताको इच्छा, चाहाना र आवश्यकताअनुसार पूरा नभएको हुन सक्छ । सिमित श्रोत, साधनको बाबजुत पनि पालिकाको आन्तरिक आम्दानी, संघ र प्रदेश सरकारको वित्तीय समानिकरणको एउटा सिमित श्रोतमा रहेर जनताको इच्छा आंकाक्षा पूरा गर्न हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । एकै वर्षमा सबैक्षेत्रको विकास सम्भव नभएको हुँदा जनतामा अलिकति निराशा पनि फैलिएको हुन सक्छ । त्यसका बाबजुत पनि प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी जनताका समस्या हल गर्न हामी लागिरहेका छौँ ।
तपाईंका चुनावी प्रतिबद्धता कति प्रतिशत कार्यान्वयन भए होलान् त ?
निर्वाचितपछिको दुई वर्ष पूरा र तेस्रो आर्थिक वर्षको अन्तिममा आउँदासम्म हामी सफल नै छौँ । विशेषतः हाम्रो पालिकाको कुरा गर्दा धेरै जस्तो जनजाती, दलित बस्ती र अलि बढी गरिबी भएकोले हाम्रो बजेट तथा कार्यक्रमहरू पनि समावेशीकरण रूपले विनियोजन भएका छन् । पालिकाले गरिब, दुखी, विकट क्षेत्र, सिमान्तकृत बस्तीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू जनता माझ सञ्चालन गरेको अवस्था छ । त्यसअनुसार यस वर्ष पनि प्रदेश सरकार र पालिकाको समपुरक कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण घरधुरीलाई खरको छानो मुक्त बनाउने अभियान पनि यसै वर्ष अन्तिम रूपमा पुगेको छ । अरू पनि धेरै कार्यक्रम छन् जुन कार्यक्रममा हामीले जनतालाई लक्षित गरेर आश्वासन दिएका छौँ त्यो हामीले पूरा गर्नेमा विश्वस्त छौँ , हामी बिचलित छैनौं ।
तपार्इंको पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
यो विषयमा मेरो पालिकालाई लिएर म गर्व गर्छु । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सम्बन्धमा खटपट यो देशभरिको समस्या हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको खटपट अन्य पालिकामा सुनिरहेका छांै तर हाम्रो गाउँपालिकामा सुरुदेखि नै त्यस्ता गतिविधि शून्य छ । यो कुरा तपाईंलाई भन्न पाउँदा खुसी र गौरव गर्छु । मैले मेरा जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई प्रष्ट रूपमा आफ्नो काम कर्तव्य र कर्मचारीको भूमिकाबारे जानकारी गराएको छु । हाम्रो काम भनेको नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने र बजेटहरू पेश गर्ने र त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसलाई चुस्तदुस्त पार्दै अनुगमन कार्यमा रातदिन खटिरहँदा कर्मचारीहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कार्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी भइसकेपछि त्यो भावनालाई कायम गरेर आफ्नो कर्तव्य सम्झेर उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहनु भएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको मनमुटाव शून्य छ ।
जिल्लामै उमेरको हिसाबले कान्छो थिए, जनताको घरदैलोमा नमस्कार गरेर भोट माग्न जाँदै गर्दा उहाँहरूले जुन माया विश्वास गरेर पालिका अध्यक्ष जस्तो सम्मानित पदमा पुयाउनुभएको छ, त्यो उहाँहरूले गरेको माया र विश्वासलाई कति पनि घात हुन दिने छैन । कोरोना कहरकैबीच यो ५ वर्षको अवधिमा पालिका क्षेत्रका जनताको मन नदुख्ने गरी मैले सकेको र जानेको काम गर्ने छु । सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तर्फबाट समृद्ध बनाउँदै पालिकाबासी जनताको जीवनस्तर सुखमय बनाउनका लागि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । यो पालिकालाई उत्कृष्ट पालिका बनाउनका लागि जनताको सेवामा लाग्ने छु ।
अध्यक्ष, माण्डवी गाउँपालिका